Kedu ka mpụta nke igwe mgbodo na -adịkarị?
Enwere n'ezie ọtụtụ nhọrọ dị iche iche maka nha agba nke igwe mbo, n'ihi ya, mgbe ị na -ahọrọ ụdị igwe mgbodo, enwere ike inwe ọtụtụ ọnọdụ maka nhọrọ nke mpụta nke igwe mbo, n'ihi ya, ekwesịrị ịme nhọrọ n'ozuzu mgbe ị na -ahọrọ nke a. ọnọdụ. Ọ ga -ekwe omume ...
Ohere azụmaahịa nke igwe mgbachi ụkwụ dị ịtụnanya
Na ndụ, ekwenyere m na ọtụtụ mmadụ na -aga nnukwu ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ihe nkiri wee zute igwe Claw Crane Machine n'ọnụ ụzọ, na ha enweghị ike inye aka kama nwee ajụjụ n'ime obi ha. Enwere ike nwee nnukwu ụlọ ahịa dị otú ahụ nwere igwe Claw Crane Machine abụọ na -akpata ego? Ndị ahịa, ụfọdụ mmadụ nwere ike jụọ, nwa bebi Ego ole ...
Kedu ụdị igwe onyinye bụ igwe kranu claw dị mma
1. Rịba ama mkpa onyinye Claw Crane Machine abụghị igwe ama ama, mana nchụso ndị mmadụ na -enweta “onyinye” bụ ebighi ebi. Banyere ụlọ ala azụmaahịa, nnukwu ụlọ ahịa, na ebe ntụrụndụ, ndị mmadụ dị njikere imefu ego mgbe ha pụtara igwu egwu. Ịhụ ihe na -amasị ha, spendi ...
Ụlọ ọrụ ntụrụndụ ụmụaka na -abawanye nke ọma
Ngwa egwuregwu vidiyo ụmụaka nke ime ụlọ na -aga n'ihu na -emeziwanye site na imewe ihe dị ka ọdịnaya egwuregwu, na ọtụtụ ụdị. Dị ka ụdị nke ugbu a siri dị, enwere ike kewaa ya n'igwe egwuregwu onyinye, igwe ịgbagharị igwe, igwe na -ebugharị mkpụrụ ego na ihe ndị ọzọ. N'èzí ụmụaka ntụrụndụ akwadebe ...
Isi 4 isi nke ihe nlekọta mmezi ụmụaka Game Machine iji mee ka ọrụ ebe mgbakọ ahụ dị mfe
N'oge a, ebe egwuregwu ụmụaka n'ime ụlọ bụ ebe ntụrụndụ kacha mkpa maka ụmụaka, ebe egwuregwu ụmụaka n'ime ụlọ na -ejupụtakarị na mmadụ, nke nwere ike ibute mfu ngwa ma ọ bụ mebie ngwa ngwa. Ọ dị mkpa ka emeziwanye ebe egwuregwu ụmụaka ime ụlọ nke ọma na -eme ya n'akụkụ niile. Na -arụ ọrụ pr ...
Igwe a na -akpọ Claw Crane nke onye nrụpụta mepụtara na -agbaso usoro oge
Ndị na -emepụta igwe Claw Crane ugbu a na -emepụta igwe na -agbaso usoro a nke ukwuu, n'ihi na ọ bụ naanị otu a ka ụlọ ọrụ ha ga -esi nwee mmasị ka mma. E kwuwerị, oge ugbu a na -eto n'ike n'ike. A na -ahụkarị na ndụ ndị mmadụ na enwere ụfọdụ ihe nwere ike ịbịaru ...
Etu ị ga -esi họrọ ọnọdụ igwe igwe mgbachi Claw iji nweta ego
N'oge a, a na -enwe ọtụtụ ụzọ esi amalite azụmahịa. Dịka ọmụmaatụ, igwe mgbachi Claw bụ ngwa bara uru karịa. Ndị ọchụnta ego na -etinye ego na ya. Mana ebe bụ ebe kacha baa uru, mmụba nke ndị mmadụ bụ nsogbu, yabụ anyị ga -enyocha ya. Nnukwu ụlọ ahịa. N'ime ụlọ ...
Igwe mgbanaka klọọkụ aghọọla ụdị ejiji ọhụụ
Kemgbe ahụ, anyị chọpụtara na ọtụtụ ndị enyi biputere ihe ndekọ nwa bebi nke ha. Nwa bebi ha, ụfọdụ mara mma, ụfọdụ mara mma, na ụfọdụ mara mma, nke na -eme ndị mmadụ anyaụfụ na ha. Ma ọ bụrụhaala na anyị na -ahụ ya, anyị ga -ahụ otu igwe igwe nkwọ ụgbọ elu ebe niile. Gịnị kpatara nke a? Ọ bụ n'ihi ...
Ihe ọmụma dị oke mkpa maka mmezi kwa ụbọchị nke igwe Claw Crane Machine
Ịrụ ezigbo igwe na -arụ ọrụ klọọkụ bụkwa ụzọ isi nweta ego. Ogo igwe na -emetụta ozugbo ma azụmahịa a na -aga n'ihu. Agbanyeghị na enwere ọrụ ire ahịa mgbe ọ gasịrị, ọ ga-emetụta ọrụ nkịtị. Adịla ntị na nhazi kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na igwe nwere nsogbu, ọ nweghị onye ...
Igwe a na -akpọ Claw Crane nwere ọtụtụ ọrụ, ndị mmadụ na -amasịkwa ya nke ukwuu
site na nchịkwa na 21-09-04
Ịdị adị nke igwe nkwọ ụgbọ ala ewetala ndị mmadụ ọ joyụ dị ukwuu. Nke a bụkwa ihe egwuregwu ọtụtụ mmadụ na -ahọrọ. Ihe kacha mkpa bụ na ọ dịghị ndị mmadụ mkpa itinye nnukwu mgbali anụ ahụ ma ọ bụ ike ụbụrụ n'oge egwu. Ọtụtụ oge, ọ bụ chi jọrọ njọ. Ọtụtụ mmadụ ...
Ihe dị na igwe Claw Crane Machine na -eme ka ndị mmadụ jupụta mmụọ ọgụ
Ọtụtụ mmadụ jupụtara mmụọ ọgụ mgbe ha na -egwu igwe Claw Crane Machine. Ha na -eche na ihe dị n'igwe dị otú ahụ nwere ike dọta mmasị ha mgbe niile. Onye ọ bụla maara na ụdị igwe a anaghị enwe nnukwu ọdịiche n'ọdịdị. Ọtụtụ ndị mmadụ na -enwe oke anụrị mgbe ha na -egwu egwu, ọkachasị ...
Igwe eji eme ntu na -enwe ọ joụ na nsogbu ndị a na -ahụkarị
Ọ dịtụla mgbe ị gụrụ consoles egwuregwu arcade? N'ozuzu, consoles egwuregwu arcade nwere joysticks. Anyị makwaara igwe klọb claw, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile bụ joysticks. Ọtụtụ n'ime ndị na -ama jijiji bụ oche dị okirikiri. M ga-ebu ụzọ kuzie gị ka esi edozie ogo 45. Ọ bụrụ na akụkụ bụ ...